NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ ထုတ်လွှင့်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာသတင်းများ 2352 ၏စာမျက်နှာ 37531 | ၂၀၂၀ NAB Show News: တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုနည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသတင်းများ။ NAB ပြရန် 2020 ။
ဘက်ပေါင်းစုံစီမံချက်သည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအားအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဘဏ္dataာရေးအချက်အလက်ပံ့ပိုးသူကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းခြင်း ...
Rick Clarkson ၏မဟာဗျူဟာအရာရှိချုပ်၊ ဒီနေ့၏မီဒီယာလုပ်ငန်းတွင်များပြားလှသောပူးပေါင်းပါဝင်မှု ...
Blackmagic Design မှ ATEM Mini Pro သည်နောက်ဆုံးပေါ် Gadget S စီးရီးများအားကူညီပေးကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Viz Vectar Plus သည်အိုင်ပီအခြေပြုဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သီးသန့်ဖြစ်ပြီးအဓိကထုတ်လုပ်မှုသို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအဖြေများယူဆောင်လာသည်။
ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများဖြစ်သော Pixel Power၊ switcher၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့်ဆာဗာအတွက် plug အစားထိုးခြင်းအတွက် plug ...
Off Fence နှင့် WaterBear ကွန်ယက်မှ Oliver Taprogge ကိုသူတို့၏အဖွဲ့များကိုကြိုဆိုသည်။ အိုလီဗာတာပေါဂျင်သည် ...
များစွာသောအကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများအတွက် OTT ပေးပို့မှုသည်အစဉ်အလာအားဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်းပြုလုပ်နေသည်။
Fremont, CA - ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက် - Blackmagic Design မှ Chulalongkorn တက္ကသိုလ်၊ Tha ...
Texas Card House Poker Club အတွက်အသံလွှင့်အရည်အသွေးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းလွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် Marshall Electronics သည် All-In ကိုသွားသည်
မြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကိုဖမ်းယူရန်မာရှယ်သေးသေးလေး HD နှင့် Compact HD Zoom ကင်မရာများရှိအိုမီဂါအသံလွှင့်ဒီဇိုင်းများ ...
LTN Global သည် ၂၀၂၀ ဒီမိုကရက်တစ်အမျိုးသားကွန်ဗင်းရှင်းတွင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်
ကိုလံဘီယာ၊ Md ။ - သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ - LTN® Global, Transform media media တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင် ...
MusicHouse မှဂရမ်မီဆုရရှိသည့်အသံထုတ်လုပ်ရန် KRK Monitors ကိုတောင်းဆိုလိုက်သည်
Steve Marcantonio သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ V စီးရီးစတူဒီယိုမော်နီတာများနှင့်စီမံကိန်းများအတွက် 10S Subwoofers အပေါ်မှီခိုသည်။
လူကြိုက်များသောမီဒီယာ - ကျော် - အိုင်ပီနည်းပညာ၏နည်းနည်းနိမ့်မျိုးကွဲနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းကသက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်။
Bonneville International မှဆန်ဖရန်စစ္စကိုဈေးကွက်မန်နေဂျာနှင့်ဒုတိယဥက္ကPresident္ဌ Carl Gardner တို့သည် ...
အားကောင်းသောအလိုအလျောက်နှင့်အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုအင်္ဂါရပ်များ Live Story Creator နှင့် LivePanel သည်တည်ရှိပြီး ...
COVID-19 နှင့်အတူမြေပြင်အခြေပြုထုတ်လွှင့်မှုကိုထုတ်လွှင့်ရန်ကုမ္ပဏီသည် COVID-19 စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။
Tom Coughlin, Coughlin Associates, Inc. , www.tomcoughlin.com COVID-19 ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့်ရလဒ်အနေဖြင့် ...
Fox ကအားကစားဖလော်ရီဒါ / Sun ကအားကစားလက်ရှိအချိန်ပြည့်အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာချုပ်ရှာကြံနေပါတယ်။ ဒီအနေအထား, Ft Lauderdale နှင့် Orlando တွင်အဆိုပါ Fox ကအားကစားဖလော်ရီဒါရုံးများများအတွက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ရေးကိရိယာများတပ်ဆင်အပါအဝင်စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှုထောက်ခံမှုအားလုံးအဝင်နဲ့အထွက်ထုတ်လုပ်မှု feeds တွေကိုအဘို့အအင်ဂျင်နီယာထောက်ခံမှုထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်။ တာဝန်များ: - ချိန်ညှိခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်ကိုရုပ်သံလိုင်းကိုဘို့မှန်ကန်စွာလည်ပတ်နေသည်အားလုံး PLN ဂီယာပစ္စည်းကိရိယာများရှိခြင်းကိုသေချာ; အားလုံးအဝင်နဲ့အထွက် PLN Feeds နဲ့မှန်ကန်သော၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကျင်းပနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများပါရှိသည်။ - အားလုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် prerecorded စတူဒီယိုဘဏ်ဍာအဘို့အအင်ဂျင်နီယာထောက်ခံမှု။ - အားလုံး ENG ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူအင်ဂျင်နီယာထောက်ခံမှုပေးရန် ...
ထုတ်လုပ်သူကြီးကြပ်မှုလက်အောက်တွင်, ဒီအနေအထားကိုတိုက်ရိုက်အားကစားဖြစ်ရပ်များ / ရှိုးများထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အားလုံးရှုထောင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များရေးသားခြင်း & တည်းဖြတ်ပျေါလှငျ, လက်ဖက်ရည်, အင်္ဂါရပ်တွေနှင့်အဖွဲ့သည်-related အစပျိုးပါဝင်သည်; ပြပွဲ element တွေကိုစုဆောင်း; သိုလှောင်မှုအတွက်တိပ်ခွေ / ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့်သစ်ထုတ်လုပ်ရေး contents တွေကို condensing ။ -Writing တာဝန်များ, ပြင်ဆင်ရန်ပျေါလှငျ, လက်ဖက်ရည်, features နဲ့ရှိုး element တွေကိုစုသိမ်းမည်။ ပစ္စည်းများစုဝေးများနှင့်ဒြပ်စင်စုစည်းဖို့စတူဒီယိုနှင့်ပြင်ဆင်ရန်အခန်းထဲမှာထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူ -Work ။ ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်များနှင့်ပစ္စည်းများအဖှဲ့အစညျးမှာ -Assists ။ စုဝေးစေနှင့်ဒြပ်စင်, ဗီဒီယို, အင်တာဗျူးနှင့်ပျေါလှငျ log ။ မီဒီယာသိုလှောင်မှုအတွက် Access ကိုနှင့်ကူညီ။ အထူးစီမံကိန်းများထုတ်လုပ် -Field ။ အစည်းအဝေးများနှင့်ဆက်စပ်သောညီလာခံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် -Participates ...
လုပ်ငန်းတာဝန်များ: - တစ်ဦးကစျေးကွက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးသည့်ကာတွန်းကွန်ရက် position နဲ့ဆက်ဆံ / မာရသွန်အားလုံး၏ကွပ်မျက်နှင့်စိတ်ကြိုက် client ကိုပရိုမိုးရှင်း coordinate ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်, ရှိသမျှဖန်တီးမှုပစ္စည်းများရရှိရန်ကွန်ယက်ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် client များနှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်ရန်နှင့်အတူစီးပွားဖြစ်ကပ်လျက်အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း, မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းနှင့်အတူစာရင်းသီးသန့်ဖယ်ထား, ကွန်ယက်မှာထုတ်လုပ်မှုသတ်မှတ်ရက်တွေ့ဆုံများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီမြှင့်တင်ရေးစနစ်တကျကွပ်မျက်ခံရကြောင်းသေချာပါဝင်သည်။ - ပုံမှန်, G အတွက် update ကိုများနှင့်ပြဿနာကာတွန်းကွန်ရက်အဆင့်အတန်းနှင့်ဒြပ်စင် Grid ကိုထိန်းသိမ်းရန်: ရောင်းအားအင်အားနှင့်ကွန်ယက်စျေးကွက်မှမောင်းတယ်။ ဤရွေ့ကား Grid ရောင်းရရှိနိုင်သောကာတွန်းကွန်ယက်မြှင့်တင်ရေးအတွက်အားလုံးဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဆံ့။ - ...
Shenandoah တက္ကသိုလ် Shenandoah Conservatory ချက်ချင်းစတင်လုပ်ဆောင်ရန်၎င်း၏ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမအဆောက်အဦများအတွက်အတွေ့အကြုံရှိထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာရှာကြံနေပါတယ်။ ဒီအချိန်ပြည့်အတွက်မူလတန်းတာဝန်များ, ပါဝင်သည်ပေမယ် Conservatory ၏ယေဘုယျတက္ကသိုလ်အသုံးပြုမှုများအတွက်ချောမွေ့ operating system ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည် Conservatory ရဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်အမ်းစထရောင်းဖျော်ဖြေပွဲခန်းမများနှင့် Goodson ရွတ်ဆိုခန်းမ / Chapel ၏နေ့-to-နေ့ကစစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲဖို့ကန့်သတ်မထားအနေအထားအကြိုးခံစား ဂီတစွမ်းဆောင်ရည်နေရာများနှင့်ကျောင်းဝင်းနဲ့ off-ကျောင်းဝင်းအုပ်စုများနှင့်အတူသူတို့အားစွမ်းဆောင်ရည်နေရာများအားလုံးကိုဖြစ်ရပ်များအချိန်ဇယားဆွဲခြင်း, တစ်လက်လှမ်းမာစတာပြက္ခဒိန်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်လိုအပ်အဖြစ်အချိန်ဇယားဆွဲပဋိပက္ခများကိုဖြေရှင်းအတွက်တိုင်းကုလားထိုင်, Ensemble ဒါရိုက်တာများ, နှင့်မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်; ပြုစုနှင့်သေချာ ...
အထူးသဖြင့်အခြားရွေးချယ်စရာ, hip-hop (ဟောင်းကျောင်းနှင့်အသစ်သော) ဂီတ၏ပုံစံအားလုံးကိုအပေါ်အသိပညာ, R & B နဲ့ pop ။ တစ်ဦးကတေးဂီတ JUNKIE ဖြစ်ရမည်။ ကောင်းပြီပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုကိုအထူးသဖြင့်ဂီတသမား, ဆယ်ကျော်သက် heartthrobs, မင်းသမီးနှင့်တီဗီအတွက်နောက်ဆုံး 10 နှစ်ပေါင်းပြသထားတယ်ကိုလညျးတတျကြှမျး။ အများအပြားဂီတဗီဒီယိုအမျိုးအစားမြေအောက်နှင့်ထွန်းသစ်စအနုပညာရှင်တွေနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်။ အင်တာနက်ကို saavy - လျှောက်ထား Facebook ကပတ်ပတ်လည်ကသူတို့လမ်းကိုသိသင့်ပါတယ်ဂီတဘလော့ဂ်များ, ဂီတသတင်းက်ဘ်ဆိုက်များ, Twitter Instagram ကို, YouTube ကိုက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အွန်လိုင်းသုတေသနလုပ်ငန်းမှာအကြီးဇွဲပြသပါ။ ဖှဲ့စညျးထားနှင့်, ဖိုင်များ ချ. ထိန်းသိမ်းရန်, ခဲ ချ. ခြေရာခံစောင့်ရှောက်အချိန်ဇယားသတ္တုများပုံသွန်းအစည်းအဝေးများနှင့်အွန်လိုင်းတင်ပြချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ကြ။ စွမ်းရည် (တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး) ကိုတည်းဖြတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ - ...
2,352 ၏စာမျက်နှာ 2,359«ပထမဦးစွာ...2,3202,3302,340«2,3502,3512,3522,3532,354»...နောက်ဆုံး»